Rivo-doza: mandray anjara amin’ny fisorohana ny loza ny fanabeazam-pirenena eto Boeny | Région Boeny
Rivo-doza: mandray anjara amin’ny fisorohana ny loza ny fanabeazam-pirenena eto Boeny
28 octobre 2014 A La Une, Actualité
“Izay tsara fiomanana, tsy ho tampohin’ny loza”. Atrik’asa fanofanana no nampiharan’ny Birao nasionalin’ny fitantanana ny tandindon-doza sy ny loza na BNGRC (bureau national des risques et catastrophes) eto Boeny izany filamatra izany ny 22 sy 23 oktobra 2014 tao amin’ny Centre d’Entrainement à la Méthode d’Activité à Madagascar ao Belobaka, disitrikan’i Mahajanga II.
Ho fiatrehana sy fiarovana aminy ary fampihenana ny loza voajanahary dia ireo lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana isan’ambaratongany (CISCO, circoncription scolaire sy ny ZAP, zone d’administration pédagogique) eto Boeny no nosafidin’ny BNGRC handray anjara tamin’ity atrik’asa ity. Izy ireo indray avy eo no hizara ny fiofanana azony amin’ireo mpampianatra sy mpianatra ary ireo mpiara-belona aminy any amin’ny fari-piadidiany avy.
Nampahafantarina azy ireo ny fomba fisorohana ny loza mialoha sy mandritra ary aoriana fahatongavan’ny rivo-doza. Teo ihany koa ny fomba fanaovana tatitra sy ny fampitana ny vaovao mikasika ny loza amin’ireo tompon’andraikitra isan’ambaratonga mba ho mari-pototra sy ho ara-potoana izany.
Nanatrika tao ihany koa ireo tompon’andraikitra avy amin’ny zandarimariam-pirenena, ny sampandraharaham-paritry ny Mponina, ny sampana Famantarana ny toetrandro ary ny sampandraharaham-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo na ONN (Organisme national de la nutrition) eto Mahajanga.
Ny tompon’andraiki-paritry ny BRGRC eto Boeny Atoa Ramahatafandry Tahiana no nitarika ny atrik’asa, notron’ny talem-paritry ny Fanabeazam-pirenena sy ireo Lefitry ny Lehiben’ny distrikan’i MahajangaI sy II ary ny Ben’ny tanànan’i Belobaka.
Aorian’ny atrik’asa dia hisy ny fijerena ny fomba fandraisany sy fampitan’ireo mpizaika ity fiofanana ity eny ifotony, hoy ny lehiben’ny BRGRC Boeny. Arahina fampiharana izany ka ao Andranofasika, distrikan’Ambatoboeny, Ankazomborona distrikan’i Marovoay ary ao Namakia, distrikan’i Mitsinjo no hanatanterahana izany manomboka ny alatsinainy 27 oktobra 2014.
Marihina fa ny Unicef no mamatsy vola izao hetsika rehetra ho fiomanana amin’ny loza voajanahary izao.